သူက ည ၁၀ နာရီကျော်တာနဲ့ ကွန်ပြူတာပိတ်ဖို့ စပြောပြီ။ ကျမကလည်း ပါးစပ်ကသာ အင်းပါ အင်းပါ နဲ့ လုပ်နေတာ...။ ၁၁ နာရီထိုးလည်း မပိတ်၊ ၁၁ နာရီခွဲလည်း မပိတ်၊ မျက်နှာကြီးပြုံးလို့ ဖြစ်စေ၊ မျက်လုံးကြီး ပြူးလို့ ဖြစ်စေ၊ မျက်ခုံး အတွန့်ချိုးလို့ ဖြစ်စေ...အဲဒီထဲက တခုခုသော အမူအရာနဲ့ ခေါင်းတခုလုံး ကွန်ပြူတာထဲ ဝင်တော့မတတ် ဘလော့ဂ် ဖတ်တုန်း။
ညဖက် တယောက်ထဲ အိပ်ရမှာ သရဲကြောက်တတ်လို့ မိန်းမယူထားတာ မဟုတ်ဘူးနော် ချစ်လို့ ယူထားတာ ဒီမှာ ကိုယ့်ဘေးနားမှာ လာအိပ်စေချင်လို့
အေး အေး မအိပ်နဲ့ မအိပ်နဲ့ မနက်ကျရင် ၆နာရီခွဲလည်း မထချင်၊ ၇နာရီထိုး လည်း မထချင်၊ နှိုးလို့လည်းမရနဲ့....
ဟာကွာ အာရုံပျက်တယ် ကိုယ့်ဘာသာ အိပ်မှာ အိပ်စမ်းပါ ဒီမှာ ပြီးအောင် ဖတ်လိုက်ချင်လို့
ဟော...ချစ်ရဲ့ ဘလော့ဂ် reader ညီမလေး တယောက် ဂျီမှာ လာနှုတ်ဆက်နေ ပြီ ပြန်ချက် (chat) လိုက်အုံးမယ် ခဏလေး....
ကျွတ်...အေး အေး မအိပ်နဲ့ နေ နေ...
11:33PM XXX: နေကောင်းလား မမ
11:34PM me: ကောင်းတယ် ညီမရေ
11:34PM XXX: မမ မအိပ်သေးဘူးလား
11:35PM me: အိပ်သေးဘူး စောပါသေးတယ် ညီမရဲ့
11:37PM XXX: မမ ဘာတွေလုပ်နေလဲ
11:37PM me: ဘလော့ဂ်လည် စာဖတ်
11:38PM XXX: @#$%^&*@#$^%^ ဟီးဟီး
11:39PM me: $%^&*@#$^% ဟိဟိ
11:40PM XXX: @#$%^&*@# ခွိခွိ
11:41PM me: $%^&*@#$^% ကွိကွိ
ချစ်....! ကိုကို စိတ်တိုလာပြီနော် မအိပ်ဘူးလား အခု
အေးပါကွာ ကိုကိုကလည်း ဒီမှာ shutting down နေပါပြီဆို...
ဒါက ကျမတို့ CKA အသံလွှင့်ရုံရဲ့ ညချမ်းချိန်ခါ တေးသံသာ ကဏ္ဍပေါ့...ညတိုင်း ၁၀:၃၀ မှာ လှိုင်း မလတ် တလတ် ၁၅၀၀ ကနေ လွှင့်လေ့ရှိပါတယ် ။ ဖရီကွမ်စီတူသူများ အတွက်တော့ ဘယ်လှိုင်းက ဖမ်းဖမ်း မိမှာပါ။
အနိမ့်အမြင့် အတက်အကျ မရှိ နေ့တိုင်း သံစဉ်တူနေတဲ့၊ ပျင်းရိပျင်းတွဲ နေ့စဉ် ဘဝထဲက အိမ်ထောင်သည် တချို့ အတုယူကြဖို့ပါ။ ဒါမျိုးလေးတွေ ရှိမှ၊ ဒီလို ကတောက်ကဆ လေးတွေနဲ့မှ အချစ်ရဲ့ နေ့စဉ်ဘဝ တောက်ပလို့နေတော့ မှာပေါ့...အားကျလိုက်ကြစမ်းပါ...:)
sosegado Fri May 14, 11:52:00 PM GMT+8
သတိထားဦး၊ ကိုယ်တော်က အိပ်ချင်တဲ့သူနှင့် သွားအိတ်နေဦးမယ်၊ ပါတတ်တယ်။
အင်ကြင်းသန့် Sat May 15, 12:10:00 AM GMT+8
သြော်...ဟုတ်ကဲ့ ဟုတ်ကဲ့ ...အံ့ဖွယ်သုတပါတကားးးးးးးး.....
မှတ်သားသွားပါတယ် မမ :)))))
သက်ဝေ Sat May 15, 12:33:00 AM GMT+8
ညချမ်းချိန်ခါ တေးသံသာ ပေါ့လေ...
ည ၁၀ နာရီခွဲကနေ ဘယ်နှစ်နာရီအထိလွှင့်တာလဲ... ခွိခွိ...
တကယ်တော့ ဘဝမှာ ကိုယ် စိတ်ဝင်စားတာ... ကိုယ် enjoy ဖြစ်တာတွေကို လုပ်ရဖို့လဲ သီးသန့် အချိန် နဲနဲလိုအပ်တယ် လို့ ထင်တာပဲ...။ အလွန်အကျွံ မဖြစ်ရင် အိုကေပါ... ဟုတ်တယ် ဟုတ်...း))
Unknown Sat May 15, 12:40:00 AM GMT+8
ကိုဇော် Sat May 15, 01:56:00 AM GMT+8
အမ်. . .
အနော်ဆို ပြောင်းပြန် လုပ်ရမှာပေါ့. . .ခစ်ခစ်. .
ကျနော်လည်း ဒါဆို အမနဲ့ မတူတောင် ရေဒီယိုကို လိုင်းပြောင်းထားဦးမှ။
နို့မို့ဆို ဖရီကွမ်စီ တွေတူနေရင် လိုင်းပူးကုန်ဦးမယ်. . ငှဲငှဲငှဲ.. .
( ကိုဇော် . . မင်းပိုင်သကွာ )
khet myint myint Sat May 15, 02:30:00 AM GMT+8
အနော့်လို လူပျိုလေးအဖို့ ဒါတွေနားမလည်ပေါင်..အားလဲမကျပေါင်... :P
အချစ်မရှိ= no ကတောက်ကဆ.. ဒါကြောင့်နေ့စဉ်ဘဝလဲ မတောက်ပ.. ဟဟ
မတောက်ပလဲ နေပေ့စေ.. တယောက်ထဲ ဘယ်လောက်ကောင်းလဲ
ရွှေရတုမှတ်တမ်း Sat May 15, 07:36:00 AM GMT+8
Anonymous Sat May 15, 07:42:00 AM GMT+8
အနိမ့်အမြင့် အတက်အကျ မရှိ နေ့တိုင်း သံစဉ်တူနေတဲ့၊ ပျင်းရိပျင်းတွဲ နေ့စဉ် ဘဝထဲက အိမ်ထောင်သည် တချို့...???
Are you trying to insult other couples...???
ချစ်ကြည်အေး Sat May 15, 08:44:00 AM GMT+8
အမည်မသိ ကျမရေးထားတဲ့စာကို အသေအချာဖတ်ရင် တခြား အိမ်ထောင်သည်တွေကို စော်ကားချင်တာလား၊ နောက်ပြောင်လိုစိတ်နဲ့ ကျီစယ်ချင်တာလား ခွဲခြားသိနိူင်ပါလိမ့်မယ်။
စတုပစ်လို့ ပြောသွားတာကတော့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ ခရော့စ်လိုင်း လုပ်သွား တာပါပဲ။
ကျမ စာတွေကို မုန်းတဲ့စိတ် အခြေခံနဲ့ လာဖတ်နေတဲ့ အတွက် စိတ်မ ကောင်း ဖြစ်ရပါတယ်....
Anonymous Sat May 15, 08:46:00 AM GMT+8
Vista Sat May 15, 09:36:00 AM GMT+8
မောင်မိုး Sat May 15, 10:35:00 AM GMT+8
အိမ်ထောင်သည်ချင်းဆိုတော့ ဆုံးမစကားနည်းနည်းပြောမယ်ဗျာ။ ဘလော့ဂ်ဂင်းခြင်းသည် အိမ်ထောင်ရေးကို အနည်းနှင့်အများ ထိခိုက်စေသည်တဲ့။ သိပ်မဂင်းနဲ့ဗျ။ ကျနော်လည်း ဂင်းတာတွေများလွန်းလို့ ပြဿနာတက်ပြီးပြီ။
ဇွန်မိုးစက် Sat May 15, 10:45:00 AM GMT+8
ခပ်မြင့်မြင့်ပြောသွားတာနဲ့ ဇွန်ပြောချင်တာ အတူတူပဲ ...အဟက်း))
မောင်သီဟ Sat May 15, 01:32:00 PM GMT+8
;) ဟိဟိ အိပ်ရေးသိပ်မပျက်စေနဲ့ဗျ
အင်းပြောသာပြောရတာ ဘလောလည်ပြီဆိုရင်လည်း မထချင်တော့ဖူးလေ...
TZA Sat May 15, 01:33:00 PM GMT+8
ခပ်မြင့်မြင့်နဲ့ဇွန်နဲ့ပြောသွားတာနဲ့ ကိုယ်ပြောချင်တာနဲ့ အတူတူပဲ.. အဟွန့်.. (ကိုယ်တွေ ခေတ်စားနေတယ်)
kay Sat May 15, 01:51:00 PM GMT+8
ပြီးရင်..ဘယ်လိုတွေ ဆက်လာမလဲ ဆိုတာ..သိနေတယ်..
စောင့်ကို ကြည့်အုံးမယ်..း)
ပုံရိပ် Sat May 15, 01:55:00 PM GMT+8
အခု ဒီမှာ မနက်၁နာရီ ထိုးနေပြီ။ တူတူပါပဲ အစ်မရေ။ ခုမှ ဘလောက်လာဖတ်ရတာ။
ဂျူနို Sat May 15, 02:48:00 PM GMT+8
...ဟုတ်တော့ ဟုတ်တယ် ကြည်ကြည်ရေ့....
....ကတောက်ကဆများရင် ရင်တုန်မယ် ....
ဟိဟိ နောက်တာ ဟုတ်ဘူး တကယ်ပြောတာ။ မောင်မိုး ပြောတာ ပေါ့သေးသေး မဟုတ်ဘူးနော်။
မြသွေးနီ Sat May 15, 07:30:00 PM GMT+8
မချစ်ရေ.. မအားတဲ့ကြားက အရောက်လာသွားပါတယ်..။
ရေးထားတာက ရေလည် ထိ...မိ...ငြိ တယ်ဗျို့..။
Moe Cho Thinn Sun May 16, 02:51:00 AM GMT+8
သူ့ကို ဘလော့ လုပ်ခိုင်းလိုက် မမ.. :D
မြစ်ကျိုးအင်း Sun May 16, 03:01:00 AM GMT+8
ပျော်ပျော်ကြီးကို ဘလော့ဂင်း နေလိုက်တော့တယ်။
အတွေးကမ္ဘာ..မှတ်တမ်း Sun May 16, 12:16:00 PM GMT+8
မချစ်ကြည်အေး ရေ...ဒါလေးပဲလားဗျာ..ကတောက်ကဆ ကလည်း...စာဖတ်သူ နည်းနည်း ချွေးပြန်..မျက်လုံးပြူးသွား အောင်..ဒုတိယ ပိုင်းလေး လုပ်ပါဦး...ဟီးးး
ညီမလေး Sun May 16, 03:05:00 PM GMT+8
ဘာလီခရီးစဉ်တွေ လာလာဖတ်ကတည်းက အမကို သဘောကျနေတာ ..။ ခုတော့ ရင်ကို ဖွင့်ချခဲ့လိုက်ပြီးD တကယ့်ကိုပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ ရယ်လိုက်ရလို့ ။။
Anonymous Sun May 16, 04:51:00 PM GMT+8
ဒီသားအဖကိုတော့ သိပ်မပြောချင်ဘူး တကတည်းမှပဲ :P
ကိုချစ်ဖေ Sun May 16, 07:36:00 PM GMT+8
Anonymous Sun May 16, 08:05:00 PM GMT+8
ဘကျောက်ပြောသလို ပွဲကြီးပွဲကောင်းတော့ လုပ်နဲ့နော် ၀င်မဆွဲဘဲနဲ့ မြှောက်ပေးနေမိမယ်
ဒဏ္ဍာရီ Wed May 19, 09:33:00 AM GMT+8
မမရေးတာကို ဖတ်ပြီး ရီလိုက်ရတယ်။ ကွန်မန့်တွေ ဖတ်တော့မှ သူတို့က ဖိုက်တင်ချတာကို ဆက်ဖတ်ချင်တာ နေမယ် မမး)))). အားလုံးအားပေးတယ် ဒါပဲလားတဲ့..။ မမရေ... ဆက်သာ ဘလော့ဂင်းတော့ .. ပြေးပြီ။း))